Service maty Casting - Anebon Metal Products Co., Ltd.
Casting fitaovana sy ny lasitra dia lafo, toy izany koa ny maty dingana fanariana amin'ny ankapobeny ihany no ampiasaina mba faobe mamokatra be dia be ny vokatra. Dia somary mora ny mpanamboatra Dié-hariana faritra, izay amin'ny ankapobeny dia mitaky ihany no dingana lehibe efatra, miaraka amin'ny vidiny iray increment ho ambany. Fanariana faty dia mety indrindra ho an'ny fanamboarana ny maro ny madinika sy salantsalany castings, ka ho faty fanariana no tena be mpampiasa ny dingana isan-karazany fanariana. Raha oharina amin'ny hafa fanariana teknika, ny ho faty-niampatra ambonin'ny dia malefaka sy manana kokoa amin'ny lafiny tsy tapaka.
Maty fanariana dia vy dingana miavaka amin'ny fanariana ny fampiasana ny lasitra ambony lavaka hampihatra fanerena an-idina ho an'ny metaly. Lasitra matetika machined avy amin'ny hery ambony alloys, ny sasany izay mitovy amin'ny tsindrona koronosy. Tena maty castings misy vy-maimaim-poana, toy ny fanitso, varahina, aliminioma, manezioma, mitarika, firapotsy ary firamainty-vifotsy sy ny hafa alloys alloys. Arakaraka ny karazana maty fanariana, ny efi-trano mangatsiaka die nanarato milina na ny efi-trano mafana die namoaka milina no ilaina.
Maty fanariana dia fanariana fomba izay ranon-javatra an-idina firaka no naidina tamin'ny tsindry amin'ny efi-trano, dia lavaka iray lasitra vy dia feno amin'ny hafainganam-pandeha avo, ary ny firaka ranon-javatra dia nanamafy eo ambany fanerena mba hanangana ny fanariana. Ny tena mampiavaka ny maty fanariana izay mampiavaka azy amin'ny hafa dia ambony fanariana fomba tsindry sy ny hafainganam-pandeha avo.
1. Ny anidina metaly mameno ny lavaka eo ambany fanerena sy crystallizes amin'ny tsindry ambony kokoa. Ny tsindry mahazatra dia 15-100 MPa.
2. Metal ranon-javatra mameno ny lavaka amin'ny hafainganam-pandeha avo, matetika amin'ny 10-50 m / s, ary ny sasany koa dia afaka mihoatra ny 80 m / s, (andalana haingana amin'ny alalan'ny ingate ho any amin'ny lavaka - ingate hafainganam-pandehany), toy izany koa ny vy anidina ny famenoana fotoana dia tena fohy, ary ny lavaka mety ho feno amin'ny tokony ho 0.01-0.2 segondra (arakaraka ny haben'ny ny fanariana).
Dié-fanariana dia fanariana fomba marina tsara. Dié-nanarato faritra nanary ny faty-fanariana, efa tena kely amin'ny lafiny tolerances sy avo ambonin'ny marina tsara. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ho faty-nanarato teny amin'ny faritra tsy azo mivory fihodinana. Parts koa hariana mivantana.
Nahoana no mahasoa ny maty fanariana tolotra?
Ny fanariana maty revolisionera dingana manan-danja maro manome soa, ao anatin'izany ny:
L Customization: Manampy mba hahazoana sarotra fikasana sy ny teny izay mahatonga azy mora ny ampanjifaina castings amin'ny orinasa mpamokatra entana dingana manokana.
l l Low vidiny
l l Multi-Functional sy ny harafesiny-mahatohitra
l Avo effiency
Amin'ny maha-Dié-nanarato mpanamboatra, Anebon Die Mandatsaka tolotra tanteraka, feno fifaliana sy ny fizahan-toetra rehetra-bato ho faty faritra sy ny vokatra. Na liana amin'ny singa manokana toy ny maty aluminium fanariana na vacuum die nanarato teny, na fotsiny te-ho nitranga fahiny ny anjara vaovao, dia afaka hahazo asa fanompoana feno traikefa eo amin'ny orinasa.
Ny metaly dia nampiasaina indrindra indrindra ny fanariana faty ahitana ny zinc, varahina, aliminioma, manezioma, mitarika, firapotsy ary firamainty-vifotsy alloys sns Na dia nandatsaka vy dia tsy fahita firy, dia azo atao ihany koa. Ny toetra mampiavaka ny metaly isan-karazany tsy ho faty nandritra ny fanariana dia toy izao manaraka izao:
• Zinc : Ny mora indrindra ho faty-hariana metaly, ara-toekarena, rehefa kely mpanamboatra faritra, mora ny akanjonao, dia avo compressive hery, plasticity avo, ary ela velona fanariana.
• Aluminum : avo lenta, orinasa mpamokatra entana, sy ny sarotra manify-mimanda castings amin'ny fahamarinan-toerana amin'ny lafiny avo, avo harafesiny fanoherana, fananana milina tsara, avo sy mafana conductivity herinaratra conductivity, ary hery ambony amin'ny avo maripàna.
• Manezioma : Easy ny milina, avo tahan'ny hery lanja, ny mampirehitra ny fampiasa matetika ho faty-ario metaly.
• Copper : Avo ditranao sy ny fanoherana mafy harafesiny. Ny tena fampiasa matetika Dié-natsipy metaly dia manana fananana tsara indrindra mekanika, anti-anaovan'ireo sy hery akaiky vy.
• firaka ary vifotsy : High hakitroky sy araka ny marina amin'ny lafiny avo ho an'ny faritra fiarovana manokana harafesiny. Noho ny antony ny fahasalamam-bahoaka, firaka io dia tsy azo ampiasaina ho toy ny fanodinana sakafo sy ny toerana fitehirizana. Tariho-firapotsy-bismuth alloys (indraindray koa misy kely varahina) dia azo ampiasaina hanaovana-tanana vita soratra sy ny mafana nohitsakitsahiko tao letterpress fanontam-pirinty.
aluminium maty fanariana , aluminium maty niampatra, aluminium maty mandatsaka faritra , nanarato teny amin'ny faritra , maty fanariana faritra , aluminium fanariana,